Shiinaha Green Tea Chunmee 8147 warshad iyo saarayaasha |Yibin Shaah
Chunmee shaah 8147
Shaaha roobka ee Shiinaha, shaaha roobka ee laga soo saaro shaaha Chunmee ee la safeeyey, oo ka dhigan in ka badan 10% badeecadaha taxanaha shaaha Chunmee.Xariijimaha shaaha la dhammeeyey waa kuwo jilicsan oo is haysta, leh midab cagaaran iyo dhaxan, caraf cusub oo dhumuc leh iyo dhadhan qafiif ah.
cidhiidhi, toosan, qaabka suniyaha
dhadhan khafiif ah oo culus, soo kicin
Waa maxay Shaaha Cagaaran ee Chunmee?
Chunmee Green Tea waa shaaha ugu wax soo saarka badan Shiinaha.Waxay leedahay suuqyada iibka joogtada ah, waana shaaha ugu caansan adduunka.
"Chunmee" Shiinaha oo macneheedu yahay "sunniyaha" , sidaas darteed waxay heshay magaceeda sababtoo ah sunniyuhu wuxuu qaabeeyey caleemo qallalan.
Faa'iidada cabitaanka shaaha chunmee:
1. Caawin dhimista miisaanka, caawimo dheefshiidka;
2. Antisepsis iyo ka hortagga bararka
3. Yaree xuubka dhiigga iyo cadaadiska.
4.Nasinta, nafis stress.ka hortagga daalka iyo iwm.
Astaamaha shaahani waa udgoon sare, xumbo qani ah, dhadhan xoog leh oo khafiif ah
Waxaad ku kari kartaa shaaha sonkorta leh dheriga shaaha dhowr daqiiqo ama waxaad ku dari kartaa xoogaa caleemo reex ah si aad u dhadhamiso.
Ma taqaan Algeria?
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Aljeeriya, ama "Algeria" marka la soo koobo, waa waddan ku yaal Maghreb ee waqooyiga Afrika.Waxay xad la wadaagtaa badda Mediterranean-ka dhanka waqooyi, Liibiya iyo Tunisia oo bari ah, Niger, Mali iyo Mauritania oo koonfur-bari ka xigta iyo Koonfur, iyo Morocco oo galbeed ah.Aljeeriya waxay leedahay bedka ugu weyn Afrika, badda Mediterranean-ka iyo dalalka Carabta, waxayna ku jirtaa kaalinta 10aad ee adduunka.
Tirada guud ee dadka Algeria waa 42.2 milyan (2017).Intooda badan waa Carab, waxaa ku xiga Berberi (qiyaastii 20% tirada guud ee dadweynaha).Qowmiyadaha laga tirada badan yahay waa Mzabu iyo Tuareg.Luqadda rasmiga ah waa Carabi, Faransiiskana waa la adeegsadaa.Islaamku waa diin dawladeed.Aljeeriya waa dalka ugu weyn ee Faransiisku yahay luqadda ajnabiga ah ee ugu horreysa.
Miisaanka dhaqaale ee Algeria ayaa ku jira kaalinta afraad ee Afrika.Cuntada iyo baahiyaha maalinlaha ah waxay inta badan ku xiran yihiin soo dejinta.
Islaamku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay caadooyinka nolosha ee dadka reer Algeria.Bisha dhaqameed ee "Ramadaan" ayaa la xusaa bisha sagaalaad ee jadwalka taariikhda Islaamka sannad kasta.
Muslimiintu waa inay ku tukadaan shan jeer subaxii, duhurkii, galabtii, maqribkii iyo habeenkii iyagoo u jihaysan dhanka Maka.Maalinta jimcaha waa maalin ay cibaadeystaan, dadkuna waxay aadi doonaan masaajidka si ay koox koox ugu cibaadaystaan ​​maalintan.
Algeria waa inaysan u isticmaalin doofaarka iyo xayawaanka doofaarka u eg sida pandas sida qaababka xayeysiinta.
Meelaha qaar ee koonfurta Aljeeriya, dadku waxay xiise gaar ah u qabaan caddaanka.Waxaa la sheegay in caddaanku ay ka tarjumayaan iftiinka kana fogaan karaan kulaylka si ay ula qabsadaan cimilada kulul.Sidoo kale waa sababta oo ah waxay u arkaan caddaan inay calaamad u tahay nabadda.
Fasalka sare ee Algeria waxay jecel yihiin inay ku hadlaan Faransiis.Haddii uu martidu ku hadlo dhawr kelmadood oo Carabi ah, martidu aad bay u faraxsan tahay.
Aljeeriya, shaahu waa cabitaanka qaabilaadda martida, waxayna jecel yihiin inay cabbaan shaaha cagaaran.Marka lagugu martiqaado guri Algerian ah, waa inaad hadiyado u keentaa martigeliyaha.
Shaaha laga keeno Algeria
Mugga iibka shaaha: 14,300 oo tan (2012, waxay gashay kaalinta saddexaad ee dhoofinta shaaha cagaaran ee Shiinaha)
Baakadaha shaaha ee caadiga ah: 85g baakad baakidh ah, 125g baakad bac ah
Noocyada shaaha cagaaran: shaaha baaruudda, shaaha chunmee
Nambarada shaaha caadiga ah: 3505, 41022, 9371
Hore: Shaaha cagaaran Chunmee 9368
Xiga: CTC 2 # Shaah madow
Shaaha cagaaran Chunmee 4011
Shaaha cagaaran Chunmee 3008